FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BULLDOG FRANTSAY - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika bulldog frantsay
'Rosa the French Bulldog dia afaka mamerina mandra-pahalany azy. Izy dia manana fangejana mahery vaika amin'ny zavatra, na dia mila mitsambikina amin'ny rivotra haka izany aza izy. Tena mahatoky sy be fitiavana izy. Tsara amin'ny ankizy izy. '
frantsay boo l-dawg
Ny Bulldog frantsay dia alika kely matanjaka, matevina, feno volo, manana loha toradroa lehibe manana handrina boribory. Ny sakamaso dia malalaka sy lalina ary misy fijanonana voafaritra tsara. Mainty ny orona, fa mety maivana kokoa amin'ny alika miloko maivana kokoa. Ny molotra ambony dia mihantona amin'ny molotra ambany. Mihaona ao ambanin'ny nify ny nify ary ny valanoranony ambany dia toradroa sy lalina. Ny masony boribory sy malaza dia misaraka ary mainty ny lokony. Mijoro mahitsy ireo sofina ramanavy, malalaka eo amin'ny fotony mihenjana amin'ny endrika telozoro ary boribory eo amin'ny tendrony. Ny haavon'ny malazo amin'ny tany dia tokony hitovy amin'ny halavany hatramin'ny malazo ka hatrany am-pototry ny rambony. Ny rambo dia mahitsy na corkscrew. Ny tratra dia malalaka sy lalina ary ny alohan'ilay alika dia lehibe kokoa noho ny farany lamosina, mamorona endrika poara. Azo esorina ny lalàm-panala. Ny palitao salantsalany dia fohy sy malama. Malalaka ny hoditra, mamorona ketrona manodidina ny loha sy ny soroka. Ny lokon'ny palitao dia misy brindle, brindle sy fotsy, crème, crème et fotsy, fawn, fawn sy fotsy, brindle, fotsy, fotsy sy brindle, fotsy sy fawn, mainty, mainty sy fawn, mainty sy fotsy, fawn sy black, fawn brindle ary fotsy sy fotsy ary fotsy. Izy io dia mety manana sarontava mainty, marika amin'ny brindle, ho piebald, misy pentina ary / na misy marika fotsy.
Ny French Bulldog dia namana mahafinaritra sy mora karakara izay milalao, mailaka ary be fitiavana. Mafana fo sy mavitrika izy io, nefa tsy faly sy mafy. Mahaliana, mamy ary mahatsikaiky tanteraka, manana toetra mampihomehy izy ary tia milomano. Mamiratra sy mora mandeha izy io. Ny Frenchie dia mifanerasera tsara amin'ny olon-tsy fantatra sy ny biby hafa ary mankafy miaraka amin'ny tompony. Milalao tsara amin'ny alika hafa izy io. Ireo frantsay izay avela hino azy ireo dia alpha dia mety ho lasa mahery setra alika. Mila fitarihana ity karazany ity ary tsy hiroborobo raha tsy misy an'io. Ny Frenchie dia tsy azo fananana ary tsy raharahiana. Rehefa mahatsapa ny tompony dia malemy fanahy na mandefitra manatrika azy io dia ho lasa mafy loha be ary ho snappish mihitsy aza. Afaka ampiofanina izy ireo raha ny tompony no milamina, nefa mafy orina, tsy miova ary manam-paharetana . Anarana serasera olombelona amin'ny canine tena ilaina. Aza omena firaiketam-po na firesaka mamy amin'izy ireo raha mampiseho karazana fihetsika tsy ilaina izy ireo fa manitsy azy ireo mafy amin'ny alàlan'ny fahefana tony. Madio ny Bulldog frantsay, ary ny ankamaroany dia hiezaka ny hisoroka puddles. indrindra tsy afaka milomano koa mitandrema manodidina ny rano. Ity karazana ity dia mahomby indrindra amin'ny ankizy be fiheverana izay mahay mampiseho fampisehoana fitarihana mety . Ity karazana ity dia mety drool sy slobber na izany aza ny isan-jato tsara amin'izy ireo dia tsy manao izany. Izy ireo koa dia mpihaza tsy an-kijanona totozy . Aza avela hivoatra ity mpampijaly kely mamy ity Syndrome kely alika .
Misy kilasy lanja roa amin'ny Bulldog frantsay: 19 - 22 pounds (9 - 10 kg) ary 22 - 28 pounds (10 - 13 kg). Maherin'ny 28 pounds dia disqualification.
Ny Bulldog frantsay dia mora voan'ny aretina mitambatra, aretin'ny hazondamosina, kilem-po ary olana amin'ny maso. Matetika ny takelaka dia tsy maintsy mamonjy zanak'osy amin'ny fizarana cesarean, satria somary lehibe ny loha. Matetika izy ireo dia manana olana amin'ny taovam-pisefoana. Mora mitroka sy mitroka izy ireo ary manana olana amin'ny andro mafana. Mora miketrona. Ny Frenchie be loatra dia mety manana olana amin'ny fifohana rivotra, noho ny kibo mivonto. Aza be loatra mampinono ity karazany ity. Mampidi-doza ny fametrahana azy ireo amin'ny fanatoranana noho ny olana mahazo azy ireo. Ny Bulldog frantsay dia fikojakojana be ary tokony ho mailo ny tompon-trano mety ho lafo ny faktiora mpitsabo azy ireo. Diniho ity alohan'ny hisafidianana alika kely Frenchie.
Ny frantsay dia tsara amin'ny fiainana an-trano. Afaka miasa mavitrika ao an-trano izy ireo ary tsy maninona raha tsy misy tokontany. Tsy mahomby izy ireo amin'ny hafanana tafahoatra.
Ny Bulldog frantsay dia mila raisina a mandeha isan'andro , izay amboarina ny alika eo anilany na ao ambadiky ny olona mitazona ny firaka, satria ny voajanahary dia milaza amin'ny alika fa ny mpitarika no mitarika ny lalana, ary izany mpitarika izany dia mila ny olombelona. Ny mihazakazaka manodidina ny tokontany malalaka dia tsy hanome fahafaham-po ny azy ireo fifindra-monina fifindra-monina . Mitandrema amin'ny toetrandro mafana. Tian'izy ireo ny mihazakazaka sy milalao ary afaka milalao mandritra ny ora maro raha avelanao izy ireo. Ny sasany manana angovo avo kokoa noho ny sasany.
Ankizy kely 3 ka hatramin'ny 5 eo ho eo
Ny Bulldog frantsay dia nipoitra tao amin'ny Nottingham faha-19 taonany, Angletera, izay nanapahan'ireo mpanao dantelina ny fanaovana kinova kely kely kokoa English Bulldog izany dia nantsoina hoe bulldog 'kilalao'. Tamin'ny taona 1860, rehefa nitondra ny mpanao asa tanana tany Frantsa ny Revolisiona Indostrialy dia nentin'izy ireo niaraka taminy ny alikany. Nanjary nalaza tany Frantsa ireo bulldog kilalao ary nomena ny anarana hoe 'Bulldog Francesa.' Niverina tany Angletera ilay karazany nony farany mba hanao fampisehoana alika. Ny Brits dia tsy faly tamin'ny anarana 'French' nomena alika izay avy any Angletera, na izany aza ny anarana 'French Bulldog' niraikitra.
Moxie ilay Bulldog frantsay mainty sy fotsy 10 volana manao izay tsara indrindra vitany ... fitsaharana.
Harley the French Bulldog amin'ny 8 volana
'Ireo no French 2-ko. Capone no lahy mainty lehibe, Kona no boribory kely. Capone dia 10 volana amin'ity sary ity ary Kona dia alika 4 volana. Capone dia goavambe malefaka. 35 lbs izy. ary feno hery. Kona dia kely kokoa izao, fa ny alikakely kely indrindra manenjika ahy hatrizay. Manenjika an'i Capone mandritra ny andro izy ary tsy manadino azy. '
Cybele Venus Boji ilay Bulldog frantsay mainty sy fotsy
Zanak'alika kely Bulldog frantsay volom-boasary
Betty ilay Bulldog frantsay 1.5 taona fotsy sy mena
Biscuit ny Bulldog frantsay amin'ny 6 taona
Bulldog frantsay iray am-pitsoahana.
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Bulldog frantsay
Sary Bulldog frantsay 1
Sary Bulldog frantsay 2
Sary Bulldog frantsay 3
Sary Bulldog frantsay 4
Sary Bulldog frantsay 5
Sary Bulldog frantsay 6
Sary Bulldog frantsay 7
Sary Bulldog frantsay 8
Alika Bulldog frantsay: sary an-tsokosoko voaangona
manao ahoana ny koka alika
boston terrier black lab mix
mifangaro amin'ny shih tzu ny schnauzer
alika kely mihira guinea vaovao
inona no tsara indrindra squirrel alika